mm3 | Zizawa's refuge
Posted by zizawa ⋅ 07/01/2011 ⋅2Comments
ပြောင်းပြီ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ယူနီကုတ်နဲ့ ဇော်ဂျီငြင်းနေကြတာတွေကို အစကနေနားမထောင်ဖြစ်ပါဘူး။
ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာ ဗမာလိုစရေးကြတုန်းက ဘာဖြစ်လို့မြန်မာ၁၊၂၊၃ စသဖြင့်သုံးသလဲမေးကြည့်တယ်။ အဲဒီတုန်းက ဘီဘီစီက ဝါဝါက ယူနီကုတ်အကြောင်းရှင်းပြတယ်။ နောက်တော့ ဘီဘီစီကသတင်းတွေဖတ်ချင်တော့ သူတို့ဖောင့်ကို ဆွဲချထားရတယ်။ အစဉ်အလာကြီးတဲ့သတင်းဌာနက စလိုက်တော့ နောက်ကလိုက်သုံးဖို့က လွယ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်။
သုံးကြည့်တော့လဲ သုံးရတာလွယ်တယ်။ အမှန်တော့ရေးရတာလဲ လွယ်တယ်။ တချို့ဟာလေးတွေ ကမောက်ကမဖြစ်နေတာတွေက အချက်မသိသေးလို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ဥပမာ ဝါဝါလို့ ရေးရင် တခါတခါကြားမှာ space ရှိတယ်။ တခါတခါ မရှိဘူး။ တခါ တခါရေးရင်လဲ ဒီအတိုင်းပဲ။ အင်္ဂလိပ်လို ညှပ်ရေးရင်လဲ တကြောင်းနဲ့တကြောင်းကြား အကွာဟာ မညီဘူး။
ဒါပေမယ့် အခုကစပြီး ဒီဘလော့မှာ ပို့စ်အသစ်တွေကို ယူနီကုတ် မြန်မာ၃နဲ့ မြင်ရတော့မှာဖြစ်ကြောင်း။ ပြောင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းက ကွန်ပျူတာစနစ်တွေနဲ့ ပိုပြီးအံ၀င်အောင်လို့ ဖြစ်ပါကြောင်း လူပိန်းတွေးတွေးပြီး ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ယူနီကုတ်နဲ့စမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ ဝါဝါ့ကိုလဲ ဒီကနေလှမ်းပြီးကျေးဇူးတင်လိုက်ပါကြောင်း။
ကွန်တမ်မက္ကင်းနစ်က uncertainty principle နဲ့ ဖီလော်ဆော်ဖီ အကျိုးဆက် »
2 thoughts on “mm3”
က်မအတြက္ေတာ့ အခုမွ ဇီဇ၀ါပို႕စ္ကို ဒဲ့ ျမင္ရေတာ့တယ္။ အရင္တုန္းက word ထဲကူးျပီး ေဇာ္ဂ်ီေျပာင္းဖတ္ရတာ။ (ဒီေကာ္မန္႕ကိုေရးရတာေတာ့ ကို႕ယို႕ကားယား ေဖာင့္ေတြ ျဖစ္ေနတုန္းဘဲ၊ ဘာလို႕လဲမသိဘူး)
Posted by မိုးစက္ပြင့္ | 08/01/2011, 05:26
I think there is no space between wa lone and yay-cha. But the space will appear if you use “zero” instead of wa lone.
Posted by zt | 10/01/2011, 18:06